Dekedda Vs Heegan, kulanka ugu adag loolanka horyaalka kubadda Kolayga 2018-19 ?
Sunday, March 24th, 2019 - 10:36:55
Friday October 26, 2018 - 11:41:19 in Wararka by Hussein Hadafow
Waxaa galabta garoonka Wiish ka dhici doona kulanki 14-aad ee wareegga labaad ,isla markaana ah kulanki 35 ee horyaalka kubadda Kolayga Wiilasha 2018-19 kaasoo dhex mari doona doona kooxaha Dekedda iyo Heegan.
Heegan ayaa wareegga labaad ciyaarta 4kulan kuwaas oo ay dhamaan guulaysatay waxayna kasoo adkaatay kooxaha, Fero, Gifts Star, Horseed iyoWacaaf , waxayna u baahan tahay in ay kulanka Galabta iyo kulankeeda u dambeeyay guulaysato si ay u xaqiijiso hanashada horyaalka, waxyanaleedahay 21 dhibcood.
Dekedda ayaa dhankeeda guulo kasoo gaartay kooxaha Fero iyo Banaadir CS Club, waxuuna kulankan noqonayaa kulanki 3-aad oo ay wareega labaad ka ciyaarto waxaana u harsan laba kulan oo kale halka Heegan , hal kulan oo kale u hari doono, waxayna leedahay 17 dhibcood.
Dekedda ayaa kulanki lugta hore ee labada koox ugaawood sheegatay 52- 39 ,waxaa u dheer kulani Super Cup-ka oo ayg Dekedda Heegan kaga guulaysatay.
Natiijadan ayaa dhanka kale waxaa duasha ka eeganaya Horseed oo xal u aragta in Heegan laga adkaato si ay rajo ugu yeeelato hanashada Horyaalka, maadaama kulanki u dambeeya horyaalka ay la ciyaari doonto Dekedda taasoo guulay Horseed heshohoryaalka ka dhigi doonta mid u furan 3-da koox.